လမ်းညွှန်ချက်များ - Hengtai (Hong Kong) share Co. , Ltd.
1.45 လက်မ TFT Display ကို
၁.၇၇ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
2.0 လက်မ TFT display ကို
၂.၂ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၂.၄ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၂.၈၃ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၃.၂ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
3,47 လက်မ TFT display ကို
၃.၅ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၃.၉ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၄.၀ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၄.၃ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၅.၀ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၅.၇ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၆.၈ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
7.0 လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၇.၈၄ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၈.၈ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
၁၀.၁ လက်မ TFT မျက်နှာပြင်
အက္ခရာ LCD မျက်နှာပြင်
ဂရပ်ဖစ် LCD Module
တူရိယာနှင့်မီတာ LCD ကို
မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် LCD ကို
0.96 လက်မ OLED မျက်နှာပြင်
LCD module အတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ 1. ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
1-1 Static Electricity အတွက်သတိပေးချက် - အောက်ပါလုပ်ရပ်များကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီပြုလုပ်သင့်သည် အဆိုပါ LCM ဂဟေ:
အထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့။ နိမ့်သောအပူချိန် (စိုထိုင်းဆနိမ့်ခြင်း) တွင်ငြိမ်သက်မှုမရှိသောကြမ်းပြင်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်။
Anti- ငြိမ်ပစ္စည်းနှင့်အတူတစ် ဦး ကွန်တိန်နာသုံးစွဲဖို့။
1-2 LCM ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမပြုမီ power switch ကိုပိတ်ထားပါ။
1-3 EMl ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားရန် ကျေးဇူးပြု၍ LCM ကိုပစ္စည်းနှင့် EMC နှင့်ဆက်သွယ်ပါ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
1-4The LCM သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင် run ပါကဆနျ့ကငျြဘ VR နှင့်အတူသင့်လျော်သောအခြေအနေမှချိန်ညှိရမည်ဖြစ်သည် အပူချိန်။
1-5 lt သည် LCDM တွင်အပူပေးစက်ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းကပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်အနိမ့်မျက်နှာပြင်ရှိမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည် အပူချိန်။
1-6 LCD ကိုခြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် LCM ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီကာကွယ်သောရုပ်ရှင်ကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။
1-7 LCM ကိုညစ်ပတ်သောအမှုန်များမှကာကွယ်ရန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောလုပ်ငန်းခွင်keepရိယာကိုသိမ်းထားပါ။
1-8 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ပျက်ကွက်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ LCM ကိုမဖွင့်ပါ။
1-10 အကယ်၍ သင်အသုံးပြုနေစဉ် PIN သို့မဟုတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြားသော cable ကိုတိုးမြှင့်လိုပါကဂဟေဂရုစိုက်ပါ ထိုကဲ့သို့သောတိုတောင်းသော circuit ကိုသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ဂဟေအဖြစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
OLED module အတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ 2.Precaution
2-1-1 module တစ်ခုတွင်အလွန်အမင်းရိုက်ခတ်ခြင်းများကိုရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပုံ ၂-၂ ပုံ ၂-၂ ပုံနှိပ်ဘုတ်တွင်အပိုတွင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ ၎င်း၏ပုံသဏ္modာန်ကိုပြုပြင်ပါ။ သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပါ OLED display module ၏အစိတ်အပိုင်းများ။
2-1-3 OLED display module ကိုမဖြုတ်ပါနဲ့။
2-1-5 OLED display module ကိုမဖြုတ်၊ မကွေးပါနှင့်။
2-1-6Soldering: IO ဆိပ်ကမ်းများသာဖြစ်သည်။
2-1-7 သိုလှောင်ခြင်း - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ကွန်တိန်နာနှင့်သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိုလှောင်ပါ။
2-1-8 သက်တမ်းတိုးရန်နှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုမသုံးရန် "Screen Saver" ကိုသုံးခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် အစစ်အမှန်လျှောက်လွှာအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွဲ့စည်းခြင်း၌တည်၏။
2-1-9 ရှည်လျားသောအချိန်ကာလအတွက် OLED panel တွင်ပုံသေသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအချိန်။
2-1-10 Winstar သည် passive component များကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ R2 နှင့် R3 adjust resistors ။ (resistors, capacitor နှင့်အခြား passive အစိတ်အပိုင်းများကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသော suupplier ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အသွင်အပြင်နှင့်အရောင်။ )
၂-၁-၁၁ Winstar သည် PCB Rev. ကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည် ... စသည် လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပြင်ပရှုထောင့်များကိုထိခိုက်ခြင်း， Winstar တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဗားရှင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ။ )
2-2-1 Display panel ကိုဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောစက်မှုသက်ရောက်မှုများကိုအသုံးမပြုပါနှင့် မြင့်မားသောအနေအထားကနေကျဆင်းနေ။
2-2-2 မျက်နှာပြင်ပြကွက်ပါက! မတော်တဆထိခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကွဲသွားပြီးအတွင်းပိုင်းအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းတွေပေါက်ကြားလာတယ် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုရှူရှိုက်မိခြင်း၊
၂-၂-၃ ဖိအားသည်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် OLED မျက်နှာပြင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ thecell ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးခြင်းနှင့်ဤကဏ္toများကိုဖိအားမလျှောက်ထားဖို့သတိထားပါဖြစ်နိုင်သည်။
၂-၂-၄ ။ OLED မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထားသော polarizer သည်နူးညံ့။ လွယ်ကူစွာခြစ်ရာဖြစ်သည်။OLED display module ကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါသတိထားပါ။
2-2-5 OLED display module ၏ polarizer မျက်နှာပြင်တွင်မြေဆီလွှာရှိပါကမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းပါ။ ဒါဟာ အောက်ပါကော်တိပ်ကိုအသုံးပြု။ အားသာချက်ယူသည်။
Scotch Mending တိပ်အမှတ် 810 သို့မဟုတ်တစ် ဦး နှင့်ညီမျှ
ထိုကဲ့သို့သော ethylalcohol ကဲ့သို့သော polarizer ၏မျက်နှာပြင်မိုcloudy်းတိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ကတည်းက။ ထို့အပြင်အာရုံစိုက်ပါ
အောက်ပါအရည်နှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းသည် polarizer ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
2-2-6 OLED display module ကိုထည့်သောအခါ OLED display module ကိုအလွန်ဂရုစိုက်ပါ စနစ်အိုးအိမ်။ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ဖိအားကို OLED display module သို့မသုံးပါနှင့် ကျော်ကွေးလျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံစံ layouts.These ဖိအားနှင့်အတူရုပ်ရှင် display ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ် performance.Aso, အပြင်ဘက်အမှုများအတွက်လုံလောက်သောတင်းကျပ်လုံခြုံ။
2-2-7 LSI ချစ်ပ်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ပုံသွင်းထားသောအပိုင်းများ၌ဖိစီးမှုကိုမသုံးပါနှင့်။
2-2-8 OLED display module ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
2-2-9 ယုတ္တိဗေဒပါဝါပိတ်ထားစဉ် input signal ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
2-2-10 OLEDdisplay modules များကိုကိုင်တွယ်သောအခါအလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံလောက်သောအာရုံစိုက်ပါ ငြိမ်လျှပ်စစ်အားဖြင့်ဒြပ်စင်ပြိုကွဲမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့။
OLED display module တွေကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေခံကိုသေချာစေပါ။
အစဉ်အလာတည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ပါ ၀ င်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ခြောက်သွေ့သောအောက်၌တပ်ဆင်ခြင်းအလုပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။
အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်သည် OLED မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လျှောက်တင်နေသည် module ကိုသတိထားပါအကာအကွယ်ရုပ်ရှင် exfoliating သည့်အခါငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးစေခြင်းငှါကတည်းက။
၂-၂-၁၁ ကာကွယ်မှုရုပ်ရှင်ကို display panel ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကပ်၍ ဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည် ၎င်းကိုမတပ်ဆင်မီအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်။ ဤအချိန်တွင် OLED display module ဖြစ်ခဲ့လျှင် အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထား, အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်၏ကျန်ကြွင်းကော်ပစ္စည်းရှိနေဆဲနိုင်ပါသည် ရုပ်ရှင်၏ဖယ်ရှားပြီးနောက် display ကို panel ကို၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျန်ကြွင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ အထက်ပါပုဒ်မ5တွင်မိတ်ဆက်နည်းလမ်းအားဖြင့်ပစ္စည်း။
2-2-12.Il လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို OLED display module နှင်းရည်ကျသောအခါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါအသုံးပြုသည် မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားရှိခြင်းသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုပျက်စီးစေပြီးသတိထားစေနိုင်သည် အထက်ပါကိုရှောင်ပါ။
3-1 OLED display module များကိုသိုလှောင်သောအခါငြိမ်သောလျှပ်စစ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအိတ်ထဲတွင်မထားပါနှင့် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်မ fluorescent lamps များ၏အလင်းများနှင့်ထိတွေ့မှု။ နှင့်လည်းမြင့်မားတဲ့ရှောင်ရှား အပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်နိမ့်သောအပူချိန် (0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်) ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။
4. Pixel အဓိပ္ပာယ်
မှတ်ချက် ၁ - အကယ်၍ pixel သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း sub-pixel ချို့ယွင်းချက်သည်သက်ရောက်မှုရှိသည့် pixel သို့မဟုတ် sub-pixel area ၏ 50% ထက်ကျော်လွန်ပါက၎င်းသည် as1 ချွတ်ယွင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်။
မှတ်ချက် ၂ ။ အတွင်းစီး ၀ င်သော ၅% ND Filter အတွင်းအတွင်း၌ကွဲပြားသောထူးခြားမှုမရှိသောမြင်သာမှုမရှိပါ စစ်ဆေးချိန်။
Note3: Mura နှင့်တောက်ပသောအစက်သည်5% transmission ND Filter ကိုအောက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။